Oraahda Ray Dalio: Weedhaha Ray Dalio ee ugu wanaagsan 72 iyo sida uu u maalgashado | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Mid ka mid ah maalgashadayaasha ugu fiican adduunka waa Ray Dalio. Waa bilyaneer Mareykan ah oo samafalayaal ah iyo maareeyaha sanduuqa maareynta shahaadada mastarka ee ADE (Maamulka Ganacsiga). Waxay hadda leedahay hanti ka badan 20 bilyan oo doolar. Sababtaas awgeed waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan in la akhriyo weedhaha Ray Dalio.
Haddii aad rabto inaad waxbarto oo aad naftaada ku dhiirrigeliso inaad bilowdo ama aad sii wadato xirfaddaada maaliyadeed, waxaan kugula talinayaa inaad sii wadato akhriska. Wax ka barashada maalgashadayaasha adduunka ugu fiican ayaa meel fog mari kara. Sababtaas oo kale, waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad aqriso oo aad gudaha ka dhigatid weedhaha waaweyn ee Ray Dalio.
1 Weedhaha 72 ee ugu wanaagsan Ray Dalio
2 Sidee maalgashi ku sameysaa
Weedhaha 72 ee ugu wanaagsan Ray Dalio
Maalgashadayaasha waaweyn sida Ray Dalio waxay taariikh dheer ku leeyihiin adduunka dhaqaalaha. Sidaa darteed, weligeed dhib malahan inaad aqriso weedhihiisa ugu caansan, waayo waxay hayaan khibrad iyo murti badan. Marka xigta waxaan arki doonnaa liistada 72-ka weedho ee ugu wanaagsan Ray Dalio:
Inaan lagu xakamayn shucuur waxay caawineysaa inaad wax ku aragto heer sare. "
Ha noqon qof kaamil ah, maxaa yeelay kuwa wax dhammaystira ayaa badanaa waqti badan ku bixiya kala duwanaanshaha yar yar ee soohdimaha iyaga oo kharashka ka bixinaya waxyaabo kale oo waaweyn oo muhiim ah. Noqo mid aan fiicnayn.
“Waqtigu waa sida webi oo kale oo noo geeya inaan la kulanno xaqiiqda oo nagu qasbeysa inaan go’aanno qaadanno. Kama joojin karno dhaqdhaqaaqeena wabigaan mana ka hortagi karno kulamadaas. Kaliya waxaan ugu dhowaan karnaa iyaga sida ugu macquulsan.
"Waxaan aaminsanahay in fahamka waxa wanaagsan uu ka imaanayo eegida habka aduunku u shaqeeyo oo aan u ogaado sida loogu shaqeynayo si waafaqsan si looga caawiyo horumarka."
"Xusuusnow inaadan kalsooni badan ku qabin qiimeyntaada, maxaa yeelay waad khaldami kartaa."
"Haddii aad ka fikiri karto naftaada intaad maskax furan u furan tahay qaab cad oo aad ku ogaan karto waxa adiga kuu fiican, iyo haddii aad codsan karto geesinimada aad ku sameyn karto, waxaad ka faa'iideysan doontaa inta aad nooshahay."
"Haddii aadan guuldaraysanayn, kama badnaaysid xadkaaga, iyo haddii aadan dhaafin xadkaaga, ma sareynaysid kartidaada."
Dhageysiga dadka aan xog-ogaalka u aheyn ayaa ka sii liita jawaab la’aan.
“Waxaan bartay haddii aad u shaqeyso si adag oo hal abuur leh, waxaad heli kartaa ku dhowaad wax kasta oo aad rabto, laakiin ma ahan wax walba oo aad rabto. Qaan-gaadhnimadu waa awoodda lagu diidi karo beddelka wanaagsan ee lagu raad-raaco kuwa fiican.
Khaladaadka waa wadada horumarka.
Si wanaagsan u dooro caadooyinkaaga. Caadaysigu malaha waa aaladda ugu awoodda badan sanduuqa qalabkaaga ee maskaxda.
"Mar kasta oo aad la kulanto wax xanuun leh, waxaad ku jirtaa marxalad muhiim u ah noloshaada: waxaad fursad u leedahay inaad doorato run caafimaad leh oo xanuun leh ama dhalanteed aan caafimaad qabin laakiin raaxo leh."
"Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad horumariso mabaadi'daada oo aad si qumman u qorto, gaar ahaan haddii aad dadka kale la shaqeyneyso."
Waligaa ha sheegin wax qof ah oo aadan toos ugu dhihi doonin, hana isku dayin inaad dadka eedeyso adigoon wajiga ka fiirin. Dadka si xun u hadla dhabarkaaga dambe waxay muujinayaan kalsooni darro daran oo aan waxba tarayn. Ma soo saarto wax isbeddel ah oo faa'iido leh, waxayna hoos u dhigtaa dadka aad xunxunayso iyo guud ahaan deegaanka.
“Haddii aad indha-indheyn karto dhibaatooyinkaaga, waxay had iyo jeer hoos u dhacaan ama baaba’aan, maxaa yeelay waxaad had iyo jeer heshaa hab wanaagsan oo lagula macaamilo marka loo eego haddii aadan iyaga la macaamilin. Mar kasta oo ay dhibaatadu sii adkaato, ayay ka sii muhiimsan tahay in aad ku dhaygagto oo aad wajahdo.
Noloshu waa sida ciyaar aad raadineyso inaad ka gudubto caqabadaha hortaagan inaad gaarto hadafyadaada. Hagaajinta ciyaartan iyada oo loo marayo tababar. Ciyaartu waxay ka kooban tahay xulashooyin taxane ah oo leh cawaaqib xumo. Kama joojin kartid dhibaatooyinka iyo xulashooyinka inay kuu yimaadaan, marka waxaa ugu wanaagsan inaad barato sida loola macaamilo.
Guushu waxay ka timaadaa inaad ogaato waxaadan aqoon, in ka badan intaad taqaan.
Talada ugu fiican ee aan ku siin karo ayaa ah inaad isweydiiso waxaad rabto, ka dibna aad weydiiso 'maxaa run ah' - ka dibna weydii 'maxaa laga yeelayaa'. Waxaan u maleynayaa haddii aad tan sameyso inaad dhaqso badan ugu dhaqaaqi doonto waxa aad rabto inaad nolosha ka baxdo marka loo eego haddii aadan sameyn! ».
“Khalad kasta oo aad naftaada ka barato, waxaad badbaadin doontaa kumanaan qalad oo la mid ah mustaqbalka, marka haddii aad ula dhaqanto khaladaadka sidii fursado waxbarasho oo soo saaraya horumar deg deg ah, waa inaad ku faraxdaa iyaga. Laakiin hadaad ula dhaqanto iyaga sida wax xun, waxaad ka dhigaysaa naftaada iyo dadka kaleba kuwa xun, mana kori doontid.
Ha ka welwelin inaad u ekaato wanaag, ka walwalsho inaad gaarto yoolalkaaga. ”
“Guusha waxaa gaara dadka si qoto dheer u fahma xaqiiqda oo yaqaana sida loogu adeegsado si loo helo waxay doonayaan. Dib u dhaca sidoo kale waa run: himilooyinka aan ku dhisnayn xaqiiqda waxay abuuraan dhibaatooyin, maahan horumar.
"Dadka daneeya inay muuqashada wanaagsanaadaan badanaa waxay qariyaan wixii aysan aqoon waxayna qariyaan meelaha ay ka liitaan, sidaa darteed weligood ma baran inay la macaamilaan si sax ah daciifnimaduna waxay weli yihiin caqabad mustaqbalka."
"Si aad u tijaabiso inaad wax badan ka daryeesho u ekaanshahaaga wanaagsan, fiiri sida aad dareemeyso markii aad ogaato inaad qalad gashay ama aadan aqoon wax."
"Dadka isku qalda waxa ay dhab ahaan doonayaan iyo runta runta ah waxay abuuraan sawirro gurracan oo xaqiiqda ka hor istaagaya inay gaaraan go'aannada ugu fiican."
Baro waxaadan aqoon. Ku raaxeyso fahamka khaladaadkaaga iyo daciifnimadaada.
"Aad ayay ugu badan tahay dadku inay u oggolaadaan madax-nacaybka inay hortaagan waxbarashada."
"Musiibada ugu weyn ee aadanaha waa dadka fikradaha qaldan qaba."
Ha ku xumaan khaladaadkaaga iyo kuwa kuwa kaleba. Waan jeclahay! Xusuusnow middaas: waa in iyaga laga fishaa; labo: waa qaybta ugu horeysa uguna muhiimsan ee nidaamka barashada; iyo seddex: inaad xumaan u yeelatid waxay kaa celineysaa inaad fiicnaato.
"Si aad lacag uga samayso suuqyada, waa inaad si madax-bannaan u fikirtaa oo aad is-hoosaysaa."
Inta badan ee aad u maleyneyso inaad ogtahay, waad sii xirnaan doontaa maskaxdaada.
"Markaad u maleyneyso inay aad u adag tahay, xusuusnow in mustaqbalka fog, inaad sameyso waxyaabaha kugu kalifaya inaad guuleysato ayaa aad uga fudud inaadan guuleysan."
Wax walba oo ka badan, waxa ka soocaya dadka ku noolaan kara kartidooda kuwa aan ahayn waa diyaar u ah inay naftooda iyo dadka kaleba si run ah u eegaan.
“Khaladka ugu weyn ee maalgashadayaashu sameeyaan ayaa ah inay aaminaan in wixii dhacay waqtiyadii la soo dhaafay ay u badan tahay inay sii socdaan. Waxay u qaateen in wax maalgashi wanaagsan ahaa xilliyadii dhowaa ay weli yihiin maalgashi wanaagsan.
Markasta oo aad xanuun dareento, waxay tilmaan u tahay in wax khilaaf ka jiro.
“Dadka dhaqanka wanaagsan leh waxay leeyihiin liisas la sameeyo oo si macquul ah loo kala hormariyo, waxayna qabtaan waxa loo baahan yahay in la qabto. Taa bedelkeeda, dadka leh dhaqanka xun ee shaqada waxay si aan kala sooc lahayn uga falceliyaan waxyaabaha ku soo kordha, ama ma qaban karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin inay sameeyaan maxaa yeelay ma jecla inay sameeyaan (ama ma qaban karaan).
"Iska jir indheer garadka isla weyni ee ka faallooda tarabuunka isagoon dhulka ku ciyaarin."
“Waxaan rumeysanahay inay jiraan sharciyo aan tiro lahayn oo caalamka ah iyo in dhammaan horumarka ama riyooyinkii la gaadhay ay ku yimaadaan ka shaqeynta qaab iyaga waafaqsan. Shuruucdan iyo mabaadi'da sida loogu shaqeynayo si waafaqsan iyaga weligoodba way jireen. Xeerarkan ayay dabiici ahaan noo siiyeen. Dadku ma samayn iyaga mana abuuri karaan. Kaliya waxaad rajeyneysaa inaad fahanto iyaga oo aad u adeegsato inaad ku hesho waxaad rabto. '
Ha shaqaalayn dadka kaliya si aad ula jaanqaado shaqada ugu horeysa ee ay qaban doonaan; shaqaaleysii dadka aad rabto inaad nolosha la wadaagto.
"Dadka ugu farxadda badan waxay ogaadaan dabeecadooda waxayna la jaan qaadaan noloshooda."
"Haddii aadan wax ku guuleysan karin, ha u maleynin inaad u sheegi kartid dadka kale sida ay tahay in loo sameeyo."
«Mabda 'Koowaad: Ka fikir naftaada inaad go'aan ka gaartid 1) waxaad rabto, 2) waxa run ah, iyo 3) waxa ay tahay inaad sameyso si aad u gaarto tan hore marka la fiiriyo tan labaad ... oo ku samee is-hoosaysiin iyo maskax furan inaad tixgeliso fikirka ugu fiican ee aad heli karto.
Milicso oo xasuusnow in dhaleeceynta saxda ahi tahay jawaab celinta ugu qiimaha badan ee aad heli karto.
"Waxaa ka muhiimsan in si fiican wax loo qabto, in ka yar in sifiican loo sameeyo waxyaabo yar yar."
"Markay dhibaato dhacdo, ku qabso wadahadalka laba heer: 1) heerka mashiinka (sababta natiijadaasi u dhacday) iyo 2) heerka xaalad-gacan-ku-taag ah (waxa laga yeelayo)."
Shirkadaha badankood, dadku waxay qabanayaan laba shaqo: shaqadooda dhabta ah iyo shaqada maaraynta dareenka dadka kale sida ay shaqadooda u qabanayaan.
"Wuxuu sidoo kale ka baqay caajisnimo iyo dhexdhexaadnimo aad uga sii cabsi badan inuu fashilmo."
"Maamulayaasha aan fahmin qaababka kala duwan ee fikirka dadka ma fahmi karaan sida dadka u shaqeeya ay ula dhaqmi doonaan xaaladaha kala duwan."
Lacag siiso qofka, ee ha u bixin shaqada. Eeg waxa dadka ku jira shaqooyinka la midka ah ee leh aqoonsiyo iyo khibrad isbarbar dhig ah, ku dar qiimo yar taas, kuna dhis gunno ama dhiirigelin kale si ay ugu dhiirrigeliyaan inay daboolka ka saaraan kubadda. Weligaa ha bixin wax ku saleysan cinwaanka shaqada oo keliya.
Dadka adiga kuu shaqeeya waa inay si joogto ah kuu xujeeyaan.
"Waxa aad noqon doonto waxay ku xirnaan doontaa aragtidaada."
La'aanta wax la qariyo waxay yareysaa buuqa waxayna dhistaa kalsooni. "
"Isbedelka waxtarka leh wuxuu bilaabmayaa markaad garato oo aad xitaa aqbasho daciifnimadaada."
“In kasta oo aan u carooday oo aan ka xanaaqi jiray dadka go’aannada ay gaareen awgood, haddana waxaan ogaaday inaysan si ula kac ah ugu dhaqmin wax umuuqda mid aan waxtar lahayn; Waxay ahaayeen uun waxyaalo nool sida ay u arkeen, kuna saleysan sida maskaxdoodu u shaqeysay.
"Ma jiro maamule heer kasta oo rajeyn kara inuu guuleysto haddii uusan lahayn xirfadda injineer urur."
Waqti kadib, waxaan ogaaday in qanacsanaanta guusha aysan ka imaaneyn inaad gaarto hadafyadaada, laakiin ay tahay inaad si wanaagsan ula dagaallanto.
"Ka taxaddar hadalada ku bilaabma" waxaan qabaa. . . » sababta oo ah qof "wax ayuu ka fikiraa" run kama dhigayso. "
Waxaan u imid inaan arko in daciifnimada dadka ugu weyn ay tahay dhinacyada awoodahooda ugu weyn.
“Geesiyaasha lama huraan waxay lakulmaan ugu yaraan hal guuldaro aad u weyn oo tijaabisa inay leeyihiin adkeysi ay dib ugu soo laabtaan oo ay si caqligal ah ula dagaallamaan oo ay go’aan dheeri ah yeeshaan.”
"Xaqiiqdu, markiba, waxay kuu soo diri doontaa calaamado xoog leh oo ku saabsan sida ugu fiican ee mabaadi'daadu u shaqeyso adiga oo ku abaalmarinaya ama ku ciqaabaya, si aad u barato sida wanaagsan ee loo waafajiyo."
“Waxay ila tahay in noloshu ka kooban tahay saddex waji. Marka ugu horeysa, waxaan ku tiirsan nahay kuwa kale waana baranaynaa. Midda labaad, kuwa kale innaga ayey ku tiirsan yihiin waana shaqeynaa. Tan saddexaad iyo tan dambana, markay dadka kale ku sii tiirsanaan doonaan oo aynaan mar dambe shaqeynayn, waxaan xor u nahay inaan nolosha dhadhaminno.
"Khaladaadkeyga xanuunka badan waxaa laga badalay inaan yeesho aragti 'Waan ogahay inaan saxanahay' waxaanan u bedelay aragti 'Sideen ku ogaadaa inaan saxanahay?'
Kala sooc inaad adiga u naqshadeeye mashiinkaaga iyo inaad shaqaale kula tahay mashiinkaaga.
“Weyn ayaa ka fiican wax laga xumaado, xunna waa ka wanaagsan tahay dhexdhexaad, maxaa yeelay cabsi ugu yaraan waxay dhadhan siisaa nolosha.”
"Waxa ugu muhiimsan ma ahayn ogaanshaha mustaqbalka, waxay ahayd ogaanshaha sida ugu habboon ee looga fal celiyo macluumaadka la heli karo xilli kasta oo ka mid ah waqtiga."
"Waxaan u maleynayaa in ururada oo dhan aasaas ahaan ay leeyihiin laba nooc oo dad ah: kuwa u shaqeeya inay ka mid noqdaan howlaha, iyo kuwa u shaqeeya mushaharka."
Ka taxaddar dadka isku qalda yoolalka iyo shaqooyinka, maxaa yeelay haddii aysan kala soocaas sameyn karin, kuma aamini kartid xilal.
Dadku way adagtahay in la helo, markaa iska hubi inaad ka fikirto sidii aad u haysan lahayd.
Ha u fiirsan oo keliya shaqadaada; fiiro gaar ah u yeelo sida shaqadaadu u qabsoomi doonto haddii aanad ka maqnayn.
Caqabadaha kugu soo food leh ayaa ku tijaabin doona oo ku xoojin doona. Haddii aadan guuldaraysanayn, kama badnaaysid xadkaaga, iyo haddii aadan dhaafin xadkaaga, ma badinaysid kartidaada.
Mabaadi'du waa siyaabo si guul leh loola macaamilo sharciyada dabiiciga ama sharciyada nolosha. Kuwa iyaga sifiican u fahmaya oo sifiican u fahmaya waxay yaqaanaan sida loola macaamilo aduunka si wax ku ool ah marka loo eego kuwa wax yar ka yaqaana ama si yar u yaqaana.
Nolosheena oo dhan, waxaan sameynaa malaayiin iyo malaayiin go'aano oo aasaasi u ah qamaar, qaar waaweyn iyo qaar yar. Sida aan u sameyno waa mudan in laga fakaro maxaa yeelay iyagu waa waxa ugu dambeyntii go'aamiya tayada nolosheena.
"Sidii Carl Jung u yidhi," Ilaa aad ka qaadatid miyir-qabka miyir-beelka, waxay toos u toosin doontaa noloshaada waxaadna ugu yeeri doontaa qaddar. Xitaa waxaa ka sii muhiimsan in go'aan qaadashadu ay ku saleysan tahay caddeyn iyo macquul marka kooxaha dadku ay wada shaqeynayaan.
Sidee maalgashi ku sameysaa
Ka dib markaan aqrinay jumladaha Ray Dalio waa inaan ogaano inuu ku saleynayo maalgelintiisa talaabooyin iyo mabaadii kala duwan. Tani guud ahaan waa maalgashi macquul ah. Way adkaan kartaa, laakiin sidoo kale waa habka ugu wanaagsan ee lacag lagu kasbado. Maalgashadahan weyn wuxuu abuuray taxane taxane ah oo caqli gal ah si howshu u fududaato. Waxaa loogu yeeraa "Mabaadi'da maalgashiga ee Ray Dalio" waxaanan ka wada hadli doonnaa xagga hoose.
Qiimayaasha: Shirkadda aan maalgashan doonno waa inay lahaataa qiyam iyo xitaa dhaqan u gaar ah, maxaa yeelay waxay qeexi doontaa habka ay u shaqeyso. Waxaa loo tixgelin doonaa wanaag haddii dhaqankeedu ku saleysan yahay daahfurnaan, raadinta waxa ugu fiican iyo runta.
Oggolaanshaha khaldan: Sidii aan horeyba ugu aragnay dhowr weedho Ray Dalio, qaladaadka sidoo kale waa inla ogolaadaa, maxaa yeelay isaga ayaaba qeyb ka ah tijaabada. Si kastaba ha noqotee, waa inay noqdaan kuwo la aqoonsan karo si ay wax uga bartaan.
Raadi runta: Mabda 'ahaan, is-hoosaysiinta iyo ku adkaysiga ayaa aasaas u ah maskaxda agaasimayaasha iyo dhaqanka shirkadda. Dhinacani wuxuu ka muuqdaa weedho dhowr ah oo uu qoray Ray Dalio.
Doorashada dadka saxda ah: Waxay ku saabsan tahay sharadka shirkadaha shaqaaleeya dad aan caadi ahayn markay shaqada timaado.
Daawee dhibaatooyinka: Si wax looga qabto dhibaatooyinka, waa inaad si toos ah u eegtaa oo aad xal u raadisaa. Nidaamyada waa in loo qaabeeyaa oo khaladaadkooda la ogaadaa si loo abuuro qorshe habsami leh, loona kordhiyo fursadaha.
Qiimaha fursadda: Mararka qaarkood waxay noqon kartaa kiiska inay jiraan laba ama in ka badan oo xal u ah dhibaatada isla waxtarka leh. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la go'aamiyo mid ka mid ah xulashooyinka ugu waxtarka badan. Si tan loo sameeyo, qiimeynta qiimaha fursadda ayaa naga caawin doonta.
Samee go'aano macquul ah: In kasta oo ay u muuqato wax iska cad, marar badan ayaa dadku ku qaadaan dareen ama shucuur, xitaa iyagoo miyir la '. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in maalgashi lagu sameeyo shirkadahaas oo falanqeeya dhibaatooyinka si maangal ah oo macquul ah u xisaabiya qiimaha laga filayo mid kasta oo ka mid ah jawaabaha suurtagalka ah. Tani waxay sidoo kale khuseysaa maalgashadaha.
Waxaan rajaynayaa in weedhaha Ray Dalio ay gacan ka gaysteen dhiirigelintaada oo ay kuu soo gudbiyeen xigmad muhiim ah iyo talo aad ku xisaabtamayso marka aad maalgashiga samaynayso. Waxaad noogu sheegi kartaa khibradaada faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Xigasho Ray Dalio
Waa maxay ganacsiga